Zvivakwa Zvisiri paMutemo Zvinoputswa Mumusha weMbare
Chikumi 19, 2021
Kanzuru yeguta reHarare yafumira kuputsa zvivakwa zvese zvisiri pamutemo mumusha weMbare izvo zvasiya vanhu vakawanda varasikirwa nemidziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora.
Migwagwa yese inoenda kuMbare yafuma nhasi yakavharwa nemapurisa uye hakuna mota dzanga dzichibvumidzwa kufamba nemigwagwa iyi.
Kuputswa kwezvivakwa izvi kwatanga mangwanani vamwe vaputsirwa vachiti vashaya mikana yekubvisa zvinhu zvavo zvanga zviri muzvivakwa izvi.
Vamwe vanga vachiputsirwa zvivakwa izvi vanga vachipopota vachiti vanoshamiswa kuti kanzuru inokwanisa kufambisa motokari kunoputsa zvivakwa asi ichiti haina mafuta edzimotokari dzinotakura marara.
Mumwe aputsirwa zvinhu zvavo, Amai Bian’a Manyere, vati havachazivi kuti hupenyu hwavo huchange hwakamira sezvo chitoro chavaputsirwa changa chichiraramisa mhuri yavo.
Mumwe murume angoda kuzivikanwa nezita rekuti Loyd anga achiita bhizimusi remakofini audza Studio 7 kuti kunyange hazvovaputsirwa achamisa zvakare misasa yake sezvo asina kwekuend
Murume uyu atiwo akambopazirwa paanoitira bhizimusi apa muna 2005 zvakare pakaitwa Operation Murambatsvina iyo yakasiya vanhu vanodarika mazana manomwe ezviuru vasisina pekugara..
VaJohn Huzhinji avo vaputsirwa imba yemapuranga kuMagaba muMbare yavanga vachigara nemhuri yavo vaudzawo Studio 7 kuti vave kutotsvakawo rubatsiro rwemari kuitira kuti vakwanise kuendesa mhuri yavo kumusha.
Asiwo mumwe murume asina kuda kudomwa nezita uyo ati arasikirwa nemari inosvika churu chemadhora ekuAmerica, abvuma kuti vanga vakavakira panzvimbo isina kukodzera, asi akati vave kutochemerawo kukanzuru kuti ivapewo pekuitira bhizimusi ravo zvakanaka.
Kunyange hazvo dare reHigh Court rakamisa kupunzwa kwezvivakwa izvi kumusha weChitungwiza, mutauriri wekanzuru yeHarare, VaMichael Chideme, vati nekuda kwekuti zvivakwa izvi hazvisi pamutemo vachaenderera mberi nekuputsa vachichenesa guta reHarare.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti vanhu vaputsirwa zvinhu zvavo varasikirwa nemari yakawanda zvikuru sezvo vanhu vakawanda vasina mabasa vachiita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu, vamwe vachiita mabasa emaoko senzira yekuriritira mhuri dzavo.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakaipoteredza,VaTafadzwa Muguti, vakaudza Studio7 munguva shoma yapfuura kuti vacharamba vachienderera mberi nekuchenesa guta zvisinei nemitongo yematare iri kumisa hurongwa hwavo.